Umkhaya - lokhu kuyisinyathelo esifanelekile kakhulu ukuthi ufuna ukulungisa. Ngokuvamile, bantfu labasha bashada endaweni rush imizwelo, ngaphandle kokucabanga ukuthi bafuna ukuphila nomunye konke ukuphila. I-Institute of Marriage and Family ezweni lakithi ongakasetshenzwa hhayi yawenza. Ithathwe kanye iqiniso lokuthi abazali bamshaya indiva ngokwanele ukuba nemfundo yezingane zabo, isizukulwane sethu intsha cishe akukho imibono mayelana yini uwukuba, futhi yini nobunzima ngezinselelo abayobhekana nazo lapho edalwa.
Ngokwezibalo, cishe isigamu imishado kuleli zwe iphela ngesehlukaniso. Ngenxa yalokho, kukhona eziningi imikhaya futhi izingane ezikhubazekile, izimpilo zabo abanalo uyise noma unina. Isimo ngokwengqondo lezi zingane zidinga ukunakekelwa. Ngeshwa, abantu abaningi musa ngisho bacabange ukuthi ukuchazela ingane mayelana amaphutha eziyenzayo.
Ngokusho odokotela bengqondo
Izazi zokusebenza kwengqondo zithi kwebantfwana labavela emindenini engaphelele lapho zikhula, ubhekane nobunzima ezinkulukazi uma udala nomndeni wakho. Lapho abazali hamba isahlukaniso, futhi ingane, ezimweni eziningi, ngaphandle ukunakwa kayise, kukushiya i isigxivizo engqondweni yakhe for a lifetime. Ezimweni ezinjalo ke akubalulekile kangako njengoba ukuchaza izizathu zesinqumo sakho ukwehlukana umndeni wengane, ngoba imiphumela ezazizolandela ngaye, akaphunyuki. Ingane uma ubhekene nesimo esinjena, ulahlekelwa ukuzethemba, umuzwa wecala, akabuyi nokuthemba abantu. Ngenxa yalokho, uma sikhula, uthola ngokwesaba okukhulu ukuthi alazi yini kwendima yomkhaya ubakhiphele umzali, okuyinto yena akazange.
"Ukuhlala ndawonye abakwazi bazohlukana!" - ubeka ukhefana
Yonke imikhaya kufanele ezomela wena kahle ukuthi isinqumo sokucekela phansi umndeni - Ngokuyinhloko isehlukaniso nengane - nokwenqaba kwakhe ukuba ningazinaki ukubaluleka kwayo. Ngoba wonke umzali kufanele kube babazi umbuzo kanjani umntwana ukuthi akaseyena ezibalulekile. Ngenxa yalesi sizathu kubalulekile ukwakha umkhaya oqinile ezokwakhela enjabulweni yabo, futhi ukulwa ngoba. Akunakwenzeka ukuba ashade ngesisekelo ukuqhanyelwa ngokomzwelo. Ngakho, ngeke kube khona ithemba ngoba ukuchuma ikusasa elingcono lazo izingane zabo.
Kubalulekile nokukhumbula ukuthi nezinkinga nokungavumelani okuthile emkhayeni hhayi kungenzeka, kodwa ungahlala yokubhekana nazo ngokuphumelelayo. Zingaba kokubili amathonya ahlukanisayo futhi nokubopha uyincenye lebalulekile. Njalo khumbula ukuthi ingane - hhayi nje abanye abazali babo, kodwa futhi ithemba labo esizayo. Ngakho-ke kubalulekile ukuba unake okukhethekile isibonelo ubuhlobo ubona ingane emndenini wakhe. Kuyinto lesi sithombe ziyohambisana ukuphila kwakhe konke.
Konke lokhu kusiholela Iqiniso lokuthi ngaphambi kokuba ubheka impendulo yombuzo kanjani ukuchazela ingane yezizathu isehlukaniso, kudingeka ngisebenzele kulezi ukuze kugwemeke izingozi ezinjalo. Kumele senze ke umthetho ukuthi isehlukaniso nengane - imiqondo engahambelani. Bobabili abazali kudingeka senze wonke umzamo ukuze kuvikelwe ingane kusukela intandane, ukungafunwa abantu futhi ukuntula uthando. Kunoma ikuphi, singakwazi ithemba - siyohlale indlela yokuphuma!
Zingaki izingane kudingeke alale izinyanga 5? Kungani ingane ngihlaselwe iphupho elibi e izinyanga 5?
Ukubuyekezwa kwe "Lamborghini Miura": incazelo, izincazelo kanye nokubuyekezwa